आदिबुद्ध समन्तभद्रको प्रार्थना | BodhiTv
आदिबुद्ध समन्तभद्रको प्रार्थना
मुकेश लामा लो
हो ! रूप र अस्तित्व, संसार र निर्वाण सबै कुराको एकै भूमि छ, तैपनि दुई पथ र दुई फलहरू, र अद्भुत रूपमा ज्ञान वा अज्ञानताको रूपमा प्रदर्शित हुन्छ ।
समन्तभद्रलाई प्रार्थना गरेर, सबै प्राणीहरू धर्मधातुको आलयमा पूर्ण रूपमा सिद्ध बुद्ध बनोस्, । सबैको भूमि संयोजित छ, र अभिव्यक्ति भन्दा परको स्व उत्त्पन्न महान् विस्तारको नाम न त संसार छ न त निर्वाण छ । यसलाई महसुस गर्नाले मात्र पनि तपाईँ एक बुद्ध हुनुहुनेछ यसलाई महसुस न गर्नाले तपाईँ संसारमा भौँतारिनु हुने छ ।
तीन लोकका तपाईँ सबै प्राणीहरूले अभिव्यक्त गर्न नसकिने भूमिको सही अर्थलाई साक्षात्कार गर्न सकोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु ।
म, समन्तभद्रले कारण र अवस्थाबाट मुक्त रहेको यस भूमिको सत्यतालाईसाक्षात्कार गरेको छु जुन केवल यो ज्ञान हो । यो बाह्य अभिव्यक्ति र आन्तरिक विचार, पुष्टि वा अस्वीकारको धब्बा विहीन छ र यो अज्ञानताको अन्धकारबाट अदूषित छ । यस प्रकारले यो स्वयम्-प्रकट हुने प्रदर्शन दोषहरूबाट मुक्त छ ।
म, समन्तभद्र, मूलभूत ज्ञानको रूपमा रहन्छु । तीनवटा लोकहरू नष्ट भए पनि, त्यहाँ कुनै डर छैन । चेतनाको वस्तुको पाँचवटा मनोहर गुणहरू प्रति कुनै अनुराग छैन । सोचाइहरूबाट मुक्त रहेको स्वतः उत्पन्न हुने चेतनाको न त ठोस रूप छ न त पञ्च विषहरू छन् ।
सारमा एकल रहेको ज्ञानको अविरल स्पष्टतामा, त्यहाँ तै पनि पञ्च प्रज्ञाज्ञानहरूको प्रदर्शन हुन्छ । यी पाँचवटा प्रज्ञाज्ञानहरू परिपक्व भएर पाँचवटा मौलिक बुद्ध कुलहरू उत्पन्न हुन्छन् र तिनीहरूको प्रज्ञाज्ञानको विस्तारबाट बयालीस जना शान्त बुद्धहरू देखा पर्छन् । पाँच वटा प्रज्ञाज्ञानहरूको उदियमान शक्तिहरूबाट साठी जना क्रोधपूर्ण हेरुकाहरू प्रकट हुन्छन् । यस प्रकारले भूमिको ज्ञान कहिले पनि अशुद्ध वा गलत हुँदैन ।
म, समन्तभद्र, सबैको मूल बुद्ध हुँ, र मेरो यस प्रार्थनाको माध्यमबाट, संसारको यो तीनवटा लोकहरूमा भौँतारिने तपाईँ सबै प्राणीहरूले यो स्वतः उत्पन्न हुने ज्ञानलाई साक्षात्कार गरोस्, र तपाईँको महान् प्रज्ञाज्ञान स्वतः वृद्धि होस् ।
तालिम दिन सकिने तपाईँ प्राणीहरूलाई मद्दत पुर्या उनको लागि मेरो प्रादुर्भावहरू निरन्तर रूपले अरबौं अकल्पनीय विधिहरूमा प्रकट हुनेछन् । तपाईँहरूले भूमिको ज्ञानलाई साक्षात्कार नगरेकोले गर्दा सुरुवात देखि नै तपाईँ प्राणीहरू अलमलमा पर्नु भएको छ ।
जे हुन्छ त्यो मायावत हो भन्नेबारे होशियार नहुनु अज्ञानताकै अवस्था हो र यो नै भौँतारिने कारण हो । यस अयथार्थ अवस्थाबाट अचानक बेहोसी र अस्थिर त्रासको सूक्ष्म चेतना आउँछ ।
त्यस अस्थिरताबाट त्यहाँ आफूलाई अलग छुट्याउने र अरूलाई शत्रुको रूपमा देख्ने बोध उत्पन्न हुन्छ । क्रमशः अलग छुट्याउने प्रवृत्ति विकास हुन्छन्, र यसबाट संसारको चक्रको सुरुवात हुन्छ । त्यसपछि पाँच वटा विषहरूको भावनाहरू विकास हुन्छन् – यी भावनाहरूको कार्यहरू अनन्त छन् । तपाईँ प्राणीहरू होसियार नभएकोले तपाईँ प्राणीहरूमा ज्ञानको कमी हुन्छ र यो तपाईँ भौँतारिने आधार बन्छ ।
मेरो प्रार्थनाको माध्यमबाट, तपाईँ सबै प्राणीहरूले आफ्नो मूलभूत ज्ञानलाई पहिचान गर्नु पर्छ ! स्वाभाविक ज्ञानको अर्थ होसियार नहुनु र मन अन्यत्र लगाउनु हो । अज्ञानतालाई दोष लगाउनुको अर्थ आफू र अरू प्रतिको द्वैध विचार हो । दुवै प्रकारका ज्ञानहरू सबै प्राणीहरूको मतिभ्रमका आधारहरू हुन् ।
समन्तभद्रको प्रार्थनाको माध्यमबाट, संसारमा भौँतारिने तपाईँ सबै प्राणीहरूले होसियार नहुनुको कालो धुवाँलाई हटाउन सकोस्, द्वैधताको टाँसिदो विचारहरूलाई हटाउन सकोस् ।
तपाईँले आफ्नै मूलभूत ज्ञानलाई पहिचान गर्न सक्नुहोस् ! द्वैध विचारहरूले शङ्का उत्पन्न गर्छ, सूक्ष्म अनुराग देखि मनको यस द्वैध स्वभावले द्वैध स्वभावहरू झन् झन् बलिया र बाक्ला हुँदै जान्छन् ।
खाना, धन, कपडा, घर र मित्र, चेतनाका पाँचवटा वस्तुहरू र तपाईँको प्रिय परिवार – यी सबै चीजहरूले तृष्णा र कामना सृजना गरेर तपाईँलाई तड्पाउने कारण हुन्छ । यी सबै सांसारिक भ्रमहरू हुन्; लोभ र लिप्साका गतिविधिहरू अनन्त छन् । अनुरक्तिको फल परिपक्व भए पछि, तपाईँको जन्म लोभ, लालसा, दुख, भोकमरी र तिर्खाले सताइएको भोको प्रेतको रूपमा हुनेछ ।
समन्तभद्रको प्रार्थनाको माध्यमबाट, अनुरक्ति भएका तपाईँ सबै अभिलाषी र लम्पट प्राणीहरूले न त तृष्णालाई अस्विकार गर्नु न त तृष्णा प्रतिको अनुरक्तिलाई स्वीकार गर्नु । तपाईँको चेतनालाई आफ्नो प्राकृतिक अवस्थामा आराम गर्न दिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँको ज्ञान स्थिर हुनमा सक्षम हुनेछ । तपाईँले सम्यक् विचारको प्रज्ञाज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् !
बाह्य वस्तुहरू देखा पर्दा, डर त्रासको सूक्ष्म चेतना उत्पन्न हुनेछ । यस डर त्रासबाट, रिस गर्ने बानी झन् झन् बलियो हुँदै जान्छ । अन्तमा, हत्या र हिंसा उत्पन्न गर्दै विद्वेष आउँछ । यो रिस परिपक्व भएपछि, तपाईँले उम्लिँदै र जल्दै नरकमा कष्ट भोग्नु हुनेछ ।
समन्तभद्रलाई प्रार्थना गरेर, छवटा लोकका तपाईँ प्राणीहरू, तपाईँलाई धेरै रिस उठ्दा, त्यसलाई न त स्वीकार गर्नुहोस् न त अस्वीकार गर्नुहोस् । यसको सट्टा प्राकृतिक अवस्थामा आराम गर्नुहोस् र स्पष्टताको प्रज्ञाज्ञान प्राप्त गर्नुहोस् !
तपाईँको मन घमन्डले भरिँदा प्रतिस्पर्धा र अपमानको विचारहरू उत्पन्न हुनेछ । यो घमन्ड झन् झन् बलियो हुँदै जाँदा, तपाईँले झगडा र गाली गलौजको पीडा अनुभव गर्नुहुनेछ । यो कर्मको फल परिपक्व भएपछि, तपाईँको जन्म देव लोकमा हुनेछ र परिवर्तन हुने र तल्लो लोकमा जन्म हुने दुख अनुभव गर्नु हुनेछ ।
समन्तभद्रको प्रार्थनाद्वारा घमन्ड विकास गर्ने तपाईँ प्राणीहरूले आफ्नो चेतनालाई यसको प्राकृतिक अवस्था आराम गर्न दिनुहोस् । त्यसपछि तपाईँको चेतना स्थिर हुनमा सक्षम हुनेछ । तपाईँले समताको प्रज्ञाज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् !
द्वैधताको बानीलाई वृद्धि गरेर, आफैलाई प्रशंसा गरेर अरूलाई निन्दा गरेर, तपाईँको प्रतिस्पर्धी दिमागले तपाईँलाई ईर्ष्या र लडाइ तर्फ डोर्यालउनेछ, अनि तपाईँको जन्म लडाईँ झगडा र धेरै हत्या भएको असुर लोकमा हुनेछ । त्यो हत्याको परिणामबाट, तपाईँको नरक लोकमा पतन हुनेछ ।
समन्तभद्रको प्रार्थना गरेर, ईर्ष्या र प्रतिस्पर्धात्मक विचारहरू उत्पन्न हुँदा, तिनीहरूलाई दुस्मनको रूपमा बुझ्न नदिनुहोस् । बस आराममा आराम गर्नुहोस्, त्यसपछि चेतनाले आफ्नो प्राकृतिक अवस्थामा स्थिर हुनेछ । तपाईँले निर्बाध कार्यको प्रज्ञाज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ !
समन्तभद्रको प्रार्थनाद्वारा ईर्ष्या र प्रतिस्पर्धात्मक विचार उत्पन्न हुँदा तिनीहरूलाई शत्रुको रूपमा न लिनुहोस् ।
विचलित, लापरवाह र बेपरवाह हुँनाले तपाईँ प्राणीहरू मंदबुद्धि, अस्पष्ट र असावधान हुनु हुनेछ ।
बेहोशी र अल्छी भएर, तपाईँले आफ्नो अज्ञानतालाई वृद्धि गर्नु हुनेछ र यस अज्ञानताको फल जनावर लोकमा असहाय भएर भौँतारिनु हुने छ ।
समन्तभद्रको प्रार्थनाद्वारा, अज्ञानताको अँध्यारो खाडलमा खसेका तपाईँ प्राणीहरूमा होसियारीको ज्योतिको चम्कियोस् र त्यसबाट विचारहरूबाट मुक्त रहेको प्रज्ञाज्ञान प्राप्त होस् ।
तीन लोकका तपाईँ सबै प्राणीहरू वास्तवमा सबैको भूमि बुद्ध जस्तै हो । तर भूमिबारेको तपाईको गलत बुझाइले तपाईलाई कुनै उद्देश्य बिना काम गर्नको लागि भौँतारिन लगाउँछ । । छवटा कार्मिक कार्यहरू सपना जस्तै मायावत् हुन । मेरा सबै प्रादर्भावहरूद्वारा छ प्रकारमा प्राणीहरूलाई तालिम दिनको लागि म यहाँ आदि बुद्ध हुँ ।
समन्तभद्रको प्रार्थनाबाट कुनै अपवाद बिना तपाईँ सबै प्राणीहरूले धर्मधातुको अवस्थामा सम्यक् सम्बोधि लाभ गरुन् ।
आह हो ! यसपछि एकजना शक्तिशाली योगीले आफ्नो मायाजालबाट मुक्त रहेको चम्किलो ज्ञानले यो धेरै शक्तिशाली प्रार्थना उच्चारण गरेमा यसलाई सुन्ने सबैले तीनवटा जीवन काल भित्र सम्यक् सम्बोधि लाभ गर्नेछन् । सूर्य ग्रहण वा चन्द्र ग्रहण लागेको समयमा भूकम्प गएको समयमा वा पृथ्वी डगमगाएको बखत् संक्रान्ति वा नयाँ वर्षमा तपाईँले समन्तभद्रलाई दृश्यभाव गर्नु पर्छ र यदि तपाईँले सबैले सुन्ने गरि ठूलो स्वरमा प्रार्थना गर्नु भयो भने ती योगीको प्रार्थनाले तीन लोकका प्राणीहरू दुखबाट क्रमशः मुक्त हुनेछन् र अन्त्यमा गएर सम्यक् सम्बोधि लाभ गर्नेछन् ।